UPDATE: Tirada dadka u geeriyoonaya feyraska Korona ee Shiinaha oo korodhay | HalQaran.com
Home Caalamka UPDATE: Tirada dadka u geeriyoonaya feyraska Korona ee Shiinaha oo korodhay
China (Halqaran.com) – Waxaa aad u sii kordhaya maalin walba dadka u geeriyoonaya feyraska Korona ee dalka Shiinaha oo haatan gaartay 106 qof iyo 4515 kale oo dhul yaal u ah.
Hay’adda Caafumaadka Dunida WHO ayaa sheegtay in halista feyraska ay gaartay heer aad u sarreeya.
Faafitaanka feyraska Karona ayaa sabab u noqday in malaayiin qof oo xilliyadan oo kale socdaallo ku tagi lahaa dalal badan ay hakiyeen safarradooda sidoo kalena arrintan ayaa gilgishay suuqa caalamiga ah.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Shiinaha u yaboohay in ay ka gacansiinayaan la dagaallanka feyraskan.
Ra’iisul Wasaaraha Shiinaha oo booqday magalaada Wuhan ayaa bogaadiyay kooxaha ku howlan gargaarka caafimaad isaga oo ballanqaaday in maalmaha soo aaddan uu ku soo biirin doono 2500 oo kale oo ah xirfadlayaal caafimaad.
Wadamada kala ah, Mareykanka, Faransiiska, Jabaan iyo Kuuriyada Koofureed ayaa magaalada Wuhan ka daad gureynaya dadka ka soo jeeda dalalkooda.
Tirada dadka u geeriyoonaya feyraska Korona ee Shiinaha oo korodhay